Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Maamulaha guud ee Wizz Air £ 100 Million oo Guno Gunooyin ah
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Hangari News • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Maamulaha Wizz Air József Váradi
Abaalmarinta agaasimaha guud iyada oo ku saleysan fidinta shirkad, iyadoon loo eegin faa iidadeeda, raadkeeda deegaanka, xaaladda xaaladaha shaqada, ixtiraamka xuquuqda bulshada iyo shaqaalaha iyo samaqabka shaqaalaha ayaa gabi ahaanba ixtiraam darro ku ah shaqaalaha oo keliya laakiin sidoo kale qoysaskooda iyo bulshada guud ahaan.
Wizz Air waxay lacag ku kasbanaysay qarashka shaqaalaha gaadiidka muddo dheer.
Shaqaalaha Wizz Air waxay la kulmaan xaalado shaqo oo adag, mushaar xumo, iyo cadaalad daro, mararka qaar xitaa sharci daro, dhaqamada dhanka maamulka.
Abaalmarinta József Váradi oo lagu siinayo bonus 100,000,000 oo gunno ah duulimaadka ay ku maamusho duulimaadkan habkan waa mid aan habboonayn oo aan la aqbali karin.
Xiriirka Shaqaalaha Gaadiidka Yurub wuxuu cambaareynayaa go'aanka bixinta bonus 100 milyan oo gunno ah oo loo siiyay agaasimaha guud ee shirkadda Wizz Air József Váradi abaalmarin ahaan koritaanka degdegga ah ee side.
Wizz Air waa shirkad leh taariikh caan ah oo ku saabsan dhaqammada bulshada lidka ku ah - cayrinta sharci darrada ah, ixtiraam la'aanta xuquuqda abaabulka, bustka ururada, iyo daadinta bulshada, in la xuso wax yar. Ma ahan wax qarsoodi ah in shaqaalaha Wizz Air ay la kulmaan xaalado shaqo oo adag, mushaar xumo, iyo cadaalad daro, mararka qaar xitaa sharci daro, dhaqamada dhanka maamulka.
Wizz Air ayaa lacag ku kasbanayay shaqaalaha gaadiidka muddo dheer. Abaal marin József Váradi iyadoo bonus 100,000,000 oo gunno ah oo loogu talagalay duulimaadka shirkadda habkan ay tahay mid aan habboonayn oo aan la aqbali karin, xitaa in ka sii badan iyada oo lagu guda jiro aafo baahsan oo ka tagtay shaqaale badan oo duulimaadyada ah oo ay soo food saartay amni darro shaqo, halis caafimaad iyo nabadgelyo oo ay ku jiraan halista caafimaadka maskaxda, culeyska shaqada ee xad-dhaafka ah, culeyska, iyo daal.
ETF waxay ugu baaqeysaa saamileyda inay ka laabtaan gunnadan, oo ay ku saleeyaan wixii gunooyin ah ee mustaqbalka madaxda sare ee shirkadaha duulimaadka dhisidda shirkad waarta oo leh xaalado shaqo oo wanaagsan, gunno wanaagsan, wadahadal bulsheed oo si fiican u shaqeynaya, iyo wanaagga shaqaalaha halkii ay ka ahaan lahaayeen oo keliya koritaanka iyo faa'iido ku saleysan dhiig-miirashada shaqaalaha.